I-Ocean-front villa, ichibi langasese eningizimu ye-AGADIR - I-Airbnb
I-Ocean-front villa, ichibi langasese eningizimu ye-AGADIR
Sidi Ifni, Souss-Massa-Draa, i-Morocco
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Peter
Ukuphunyuka okukhulu kuqala lapha! Jabulela i-villa yasolwandle eyingqayizivele endaweni ethule - amahora amabili ezansi nogu ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Agadir.
I-Villa 'seahouse' inezikhala ezinhle nokubukwa. Inikeza ubumfihlo obuphelele. Amaqembu we-1-12 ahlala esebenzisa i-villa kuphela.
Uma ufisa, xoxa ngokuvakasha kwakho ngaphambi kokubhukha ukuze uqinisekise ukutholakala FUTHI uvikele izinga lethu elingcono kakhulu!
I-villa ise-Sidi Ifni, indawo encane yokuphumula, ephephile kakhulu futhi eyamukelekayo ... enhle kakhulu ngelanga, ulwandle kanye namaholide omsebenzi anezindawo zokudlela ezinhle nemigoqo!
I-Villa Seahouse inendawo eyingqayizivele ebheke i-Atlantic. Ihlala eweni enikeza ukubukwa kolwandle okungu-180degree futhi amasimu awashaywa indiva - into eyivelakancane. I-villa inengaphakathi elimangalisayo, elibandakanya isikhala, ukukhanya nolwandle - umakhi wethu uphinde waklama iMACRO Art Museum eRoma.
Empeleni, iSeahouse iyikhaya lomndeni elinethezekile. Ekulakheni nasekunikezeni sihlose ukusebenzisa izinto zasendaweni nezisimeme. I-villa iyatholakala ukuze uqashelwe ukuziphekela futhi sinikeza ukwesekwa ezivakashini ngesikhathi sokuhlala kwazo. Ukubuyekezwa kwezihambeli kwamanye amasayithi kunikeza umbono omuhle wokuthi yini ongayilindela.
Kukhona indawo yangaphakathi ekhanyayo engu-300sq.m enebhuloho elinqamula endaweni yokudlela enobude obuthathu. Esikhaleni esimaphakathi uthola isaluni enokufinyelela okuqondile echibini lethu elishisayo, indawo yokudlela enezihlalo ezingafika kuzivakashi eziyi-12 kanye nekhishi elifakwe kahle. Ungakwazi nokufinyelela ku-hammock enkulu! Lesi sikhala kwesinye isikhathi sisetshenziselwa imibukiso yobuciko futhi kungenzeka uthole imidwebo ethokozisayo. Ukubuka kolwandle yiyona nto ekhanga kakhulu.
Wonke amagumbi okulala ayi-6 anamagumbi okugezela ahlangene, ukubukwa kolwandle kanye nokufinyelela kuthala noma kuvulandi. Igumbi lokulala lesi-6 nalo lakhiwe njengegumbi lethu le-TV elinemibhede emi-2 eyodwa - elungele izingane.
I-Villa Seahouse imayelana nokubuka!
Kukhona amasimu angu-300sq.m nama-balconi. Ichibi lethu elishisayo (16m) alibukeki ngokweqile ngakho linikeza ubumfihlo obuphelele. Amathafa anamagumbi okuhlala ilanga kanye nezihlalo ezinamatafula okudlela ngaphandle.
I-villa isendaweni yokuhlala ethule futhi ngaphakathi kwayo kunomhlaba owawo.
Uhambo lwemizuzu engu-10 ogwini lolwandle noma phezu kwenkundla yezindiza endala kukuyisa edolobheni elincane laseBerber i-Sidi Ifni ukuze uthole izimakethe, izitolo, izindawo zokudlela kanye namabha amabili! ISidi Ifni yakhiwa ngabaseSpain ngeminyaka yawo-1930 futhi idume ngezakhiwo zayo zomphakathi ze-Art-Deco.
Singahlela ukudluliselwa esikhumulweni sezindiza sase-Agadir - ukushayela phansi kuthatha cishe amahora ama-2. U-Youssef, umphathi, angakwazi futhi ukuhlela usizo ngokupheka, amatekisi nokuqasha imoto, ukunakekela izingane nohambo lwasemini - izindleko ezengeziwe ziyasebenza.
I-Sidi Ifni iyidolobha elincane laseBerber, eliphephe kakhulu futhi lamukelekile - lilungele ilanga, ulwandle kanye namaholide omsebenzi. Ngeke ukhathazeke futhi izivakashi zikuthole kuwukuzizwisa okuyiqiniso - jabulela izimakethe zansuku zonke zezithelo nezinhlanzi noma zitholele eyakho ikhefi encane kude nakho konke...
Izivakashi zingajabulela nemisebenzi eyahlukene - ukuntweza, ukudoba, ukugibela amahhashi, i-paragliding, ithenisi, amabhayisikili ama-quad njll. Kanye nohambo losuku oluya ezindundumeni zesihlabathi saseSahara e-Plage Blanche noma imakethe yamakamela edumile e-Gulmim!
Sizokukhombisa ukuthi i-villa isebenza kanjani futhi sikunikeze ukhiye.
Umphathi wethu wendlu, u-Youssef, uzobe eshayela ucingo futhi uzokusiza lapho kudingeka - ngaphandle kwalokho sizokuhlonipha ubumfihlo bakho. Udinga ukufinyelela kwansuku zonke ukuze anakekele ichibi kodwa uhlela lokhu ukuze kufanelane nawe.
Incekukazi, u-Aicha, iza nsuku zonke ngo-10.00-12.00 - ungashintsha isikhathi noma ucele ukuthi angezi.
Singahlela futhi ukudla, ezokuthutha kanye nabashayeli, ukunaka izingane kanye nohlu lwemisebenzi - uhambo lokuya ogwadule, ukuntweza, ithenisi, ukugibela, njll.
Umphathi wethu wendlu, u-Youssef, uzobe eshayela ucingo futhi uzokusiza lapho kudingeka - ngaphandle kw…
Hlola ezinye izinketho ezise- Sidi Ifni namaphethelo